Maro ireo fahadisoana ao anatin`ny lisi-pifidianana ka anisan`izany ny anaran`ireo mpifidy maro izay tsy tafiditra ao anatin`izany. Takian`ireo kandidà 22 ny fanitsiana ireo fahadisoana ireo sy ny fampitomboana tsy araka ny tokony ho izy ny isan`ny biraom-pifidianana satria very zo tsy fidiny ny mpifidy sasany. Mila mibaiko ny CENI ny HCC amin`ny hanokafana ny lisi-pifidianana ary diovina ireo diso rehetra. Tsy nilaza ny fanapahan-kevitra horaisiny ireo solontenan`ireo kandidà 22 ireo fa kosa mahatoky ny fahendren`ny HCC amin`ny valin-teny omena. Hivoaka afaka fotoana fohy ny valin-tenin`ny HCC, hoy izy ireo. Ny alahady ho avy izao kosa dia hifampitaona eny amin`ny kianja monisipaly Alarobia ireo kandidà 22 ireo sy ireo mpomba azy ireo.